कथा : दृष्टि - Safal Stories
Home Short Stories कथा : दृष्टि
कथा : दृष्टि
घरको कौसीमा सिसा लगाइएको थियो । श्रीमान सधै त्यहाँ बसेर बाहिरको दृश्य हेर्ने गर्थे । घरको हरेक काम श्रीमतीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी कौसीमा कुर्सीमा बसेर सिसा बाहिरको दृश्य हेरेर रमाउँथे । चिया पिउन होस्, पत्रिका पढ्न होस्, किताब पढ्न होस् या त यत्तिकै आराम गर्न होस्, उनलाई त्यो ठाउँ नै प्रिय लाग्थ्यो ।
एकदिन कौसीमा पुगेपछि उनले चिच्याउदै श्रीमतीलाई बोलाए । श्रीमती आफ्नो अगाडी पुगेपछि उनले हप्काउदै भने, ” सिसा कति फोहोर भएछ, देख्दिनस् ? बाहिरको दृश्य सबै धमिलो देखिएको छ” । श्रीमान कुर्सीमा बसे । श्रीमतीले सिसा पुछिन् र तल झरीन् । तल झरेको केही मिनेटमै श्रीमानले फेरी चिच्याउदै बोलाए र भने ,” के पुछेको हँ ? अझै पनि सिसा फोहोर छ । धमिलो देखिएको छ “।
श्रीमतीले सिसा पुछ्न थालिन् । श्रीमानले सिसा राम्रोसंग पुछ्न आदेश दिंदै उभिएर निगरानी राखे । श्रीमतीले राम्रोसंग पुछिन्, तर उनले सिसा बाट हेर्दा अझै पनि धमिलो नै देखे । उनलाई अचम्म लाग्यो । आँखाको चस्मा खोले । ओहो ! अहिले त सिसा सफा देखिन्छ । चस्मा पो फोहोर रहेछ ।
ती श्रीमानलाई श्रीमतीको अगाडी लाज लाग्यो । र, श्रीमतीलाई गरेको गाली सम्झेर पछुतो लाग्यो ।
सामाजिक संजालमा कुनै कुरा देख्नासाथ प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने, अरुको आलोचना गरिहाल्ने हाम्रो अहिलेको बानी धेरैजसो अवस्थामा यही कथासंग मिल्दा उदाहरण बन्छन् । आफ्नो अगाडी कसैलाई देख्दा, कसैको काम हेर्दा होस् या जुनसुकै अवस्थामा हामी अरुको आलोचना गर्न र अझ अरुलाई सल्लाह दिन समेत पछि पर्दैनौं । तर हामीलाई हाम्रो दृष्टि, हाम्रो सोंचको बारेमा ज्ञान हुँदैन । पहिले आफ्नो सोंच बदलौं, आफ्नो दृष्टिकोण बदलौं , अनि मात्र अरुको मूल्यांकन गरौँ ।
Previousइसपका जीवनोपयोगी भनाइहरु